Vaovao - Fanatanjahan-tena any an-trano fanoherana
Miaraka amin'ny vanim-potoanan'ny gripa sy ny fitsangantsanganana covid-19 amin'izao fotoana izao, gym maro be no mikatona vetivety indray. Ity fanazaran-tena ity dia azo atao ao an-trano ary mila tarika fanoherana misokatra fotsiny.
Ny bandy dia misy sakany samihafa. Arakaraka ny hateviny ny sakany, arakaraky ny fanoherany no omeny ary vao mainka sarotra ny mampiasa azy. Azonao atao ny mividy karazana band maromaro mba hahafahanao mandroso rehefa mihamatanjaka ianao.
Mahatsiaro ho hafahafa kely ny fampiasana tarika rehefa manomboka ianao. Ny lakileny dia ny hahazoana antoka fa mifehy ny fihenjanana sy ny hafainganan'ny fihetsika ianao mba tsy hitifiranao ireo fehy amin'ny faran'ny repoblika tsirairay.
Betsaka ny tombony azo amin'ny fampidirana ireo tarika fanoherana ho isan'ny fihodinana fampihetseham-batana mahazatra anao. Manampy anao amin'ny fananganana hery izy ireo, manatsara ny fivezivezena ary manangona ny hozatrao miorim-paka hanampy anao hanangana tanjaka fototra miaraka amin'ny vondrona hozatra voalohany miasa. Izy ireo koa dia manome anao fialan-tsasatra amin'ny monotony milina fanaovana fanatanjahan-tena ary ho tombony fanampiny dia maivana sy mora entina izy ireo mba hahafahanao mitondra azy ireo raha mandeha ianao.
Ankehitriny, ho an'ny fampihetseham-batana!
Hetsika famanam-batana 1 5 minitra Cardio
Andalana mipetraka amin'ny tarika 4 12 30 segondra
Atsangano miaraka amin'ny tarika 3 8 ny lafiny tsirairay 30 segondra
Press Press 4 12 30 segondra
Curic bisikileta miaraka amin'ny tarika 4 15 30 segondra
Andalana mahitsy misy tarika 3 12 30 segondra
Mampangatsiaka 1 5 minitra Cardio
Andalana mipetraka miaraka amin'ny tarika fanoherana
Mipetraha amin'ny tany miaraka amin'ny tongotra mahitsy eo alohanao.
Mihazona fehin-kibon'ny fanoherana, apetraho amin'ny tongotrao ny afovoan'ny fehy, avy eo aforeto indray ny faran'ny tsirairay ao anaty sy manodidina ny tongotra tsirairay mba hanaovana tadivavarana amin'ny tongotra tsirairay.
Mipetraha avo amin'ny tights abs ary hazony ny tananao eo alohanao miaraka amin'ny kiho miondrika eo akaikinao.
Avereno miverina ireo tahony mandra-pahatongany eo akaikin'ny sisinao ary kiho ao aorianao. Afaho moramora.
Atsangano miaraka amin'ny tarika
Mijoroa miaraka amin'ny tongotrao amin'ny faran'ny loop.
Tazomy ny faran'ny tarika, avelao hahantona mahitsy ireo tahony ary mifanatrika ny felatananao.
Ataovy eo amin'ny toerany ny vatanao, atsangano mahitsy eo anilanao ny sandrinao.
Miato kely, avy eo miverina miadana tsikelikely amin'ny fanombohana.
Raiso ny faran'ny iray hafa ary ento miakatra amin'ny tratranao miaraka amin'ny felatanana miatrika miakatra.
Mitazà fihetsika mahitsy ary jereo kely.
Mandrosoa miakatra mandra-pikatona ny kiho, avy eo miverina miadana miverina amin'ny toerana fanombohana.
Fiadiana Bicep Band fanoherana
Mijoroa amin'ny tongotra roa amin'ny sisin'ny fanoherana mitazona tanany lava eo akaikin'ny sisinao miaraka amin'ny felatanana miatrika mandroso.
Alefaso moramora miakatra hatramin'ny soroka ny tanana, manindry bisikileta ary mitazona ny kiho eo akaikin'ny sisintsika.
Alefaso miverina tsimoramora mankany amin'ny toerana manomboka ny sandry.
Andalana mahitsy misy tarika fanoherana
Mihazona fehin-kibon'ny fanoherana, apetraho eo ambanin'ny tongotrao ny afovoan'ny tarika
Sintomy ny tahony mandra-pahatongan'ny sofina sy ny kiho eo ambonin'ny lohanao. Afaho moramora.